Hiragasy goavambe: hifanandrina ny tarika Fredy Kely sy Razakason | NewsMada
Hiragasy goavambe: hifanandrina ny tarika Fredy Kely sy Razakason
… Samy andrarezina no hifanandrina ! Adin-kiragasy goavambe hotontosaina ao amin’ny Kianjan’ny Kanto Mahamasina, ny alahady 28 novambra izao, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Hifandona amin’izany ny tarik’i Fredy Kely avy any Imerintsiatosika sy ny tarika Razakason avy any Fenoarivo. « Hifandona ny andrarezina satria samy manana ny laza sy ny mampiavaka azy ny roa tonta », hoy i Dadafara.
Iraisan’ireto tarika ireto kosa anefa ny fananana traikefa matanjaka be eo amin’ny hiragasy, raha ny fanazavan’i Dadafara LT Prod. I Fredy Kely, efa niaraka tamin’ireo tarika mpihiragasy manana ny maha izy azy. Razakason, efa nifandona sy nifanandrina tamina tarika marobe ihany koa. Traikefa goavanabe ireo ho an’ny mpijery sy ny mpitia hiragasy. « Hizara izany rehetra izany ireo tarika ireo amin’ny alahady izao. Fanabeazana ho an’ny ankizy sy ny tanora ny hiragasy. Mahavariana ny fahaizan’ny mpihiragasy sy ny mpandihy maneho hevitra. Maro ny voambolana fampiasan’ny Malagasy fahiny no tsy heno firy intsony ankehitriny », hoy hatrany ny mpikarakara.
Marihina fa anisan’ny nitaizan’ny Malagasy ny taranany ny hiragasy. « Izay indrindra no mahatonga anay hanentana manokana ny ankizy sy ny tanora hanatrika adin-kiragasy goavambe tahaka itony », hoy i Dadafara.